सामान्य घरेलु उपायले पनि हटाउन सकिन्छ डन्डीफोर, कसरी हटाउने ?
सामान्य घरेलु उपायले पनि हटाउन सकिन्छ डन्डीफोर, कसरी हटाउने ?
स्टिम न्युज वि.सं २९ भाद्र २०७६, आईतवार १७:५१
सुन्दर देखिने चाहना कसको हुँदैन र ? तर, सुन्दर र चम्किलो छाला भन्ने बित्तिकै बनाउन भने त्यति सजिलो छैन, आम मानिसहरूको लागि डन्डीफोर त्यस्तै पिरोल्ने समस्या हो जसले अनुहारलाई कुरूपनै बनाइदिन्छ ।
सुन्दर मुहारलाई कुरुप बनाउने डन्डिफोरलाई सामान्य घरेलु उपायले पनि हटाउन सकिन्छ । डन्डीफोरबाट छुटकारा दिलाउने केही घरेलु उपायहरू यस्ता छन् ।
केराको प्याकले छालालाई कोमल बनाउनका साथै छालाको भित्री भाग सम्म पोषण पनि पुर्याउँछ । केराको साथसाथै त्यसको बोक्रा पनि त्यति नै लाभकारी छ। यसले डन्डीफोरको समस्या हटाउन मद्दत गर्छ। केरालाई मुछेर यत्तिकै वा महसँग मिसाएर लगाउँदा अनुहारका छिद्र खुल्छन्। जसले गर्दा अनुहारलाई भरपुर अक्सिजन मिल्छ। दहीसँग केरा मिसाएर लगाउनाले पनि फायदा हुन्छ। पानीले धोएपछि अनुहारमा आइस दल्ने र मसाज गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
डन्डीफोरका लागि कागतीको रस एकदमै प्रभावकारी घरेलु सामग्री हो। यसले डन्डीफोरको समस्या हटाउनका साथै छालालाई चम्किलो पनि बनाउँछ। तर, कागतीको रस सीधै अनुहारमा लगाउँदा यसले पोल्छ। त्यसैले यसलाई पानी वा महसँग मिसाएर लगाउनु राम्रो हुन्छ।
महले अनुहारमा भएका डन्डीफोरलाई हटाउन मद्दत गर्छ। डन्डीफोर भएको भागमा मह दलेर केही बेर राख्ने र १५ मिनेटपछि चिसो पानीले धुने गर्दा डन्डीफोरबाट छुटकारा पाउन सकिन्छ। अझ तपाईलाई छाला चम्किलो, ताजा र सुन्दर बनाउन मन छ भने चिसो दूधले अनुहार धुन सक्नुहुन्छ । यो उपायले डन्डीफोरको समस्याबाट छुटकारा दिलाउनुका साथै छालालाई चम्किलो समेत बनाइदिन्छ ।
डन्डीफोरको समस्याबाट राहत दिलाउन ल्वाङ निकै गुणकारी मानिन्छ । एक कप पानीमा ल्वाङ उमालेर । पानी चिसो भएपछि त्यसमा भएका ल्वाङलाई मुछ्ने र मुछिएको लेदोलाई डन्डीफोर भएको ठाउँमा दल्ने । यसका पाउडर वा पेस्ट बनाएर अथवा यसको तेललाई डन्डीफोर भएको ठाउँमा लगाएमा धेरैनै फाइदा हुन्छ। यसो गर्दा ल्वाङको पेस्टलाई डन्डीफोर भएको ठाउँमा आधा घण्टासम्म राख्ने र त्यसपछिचिसो पानीले अनुहार धुनुपर्छ।
चन्दन पाउडरबाट पनि डन्डीफोर हटाउन सकिन्छ। बेसनमा अलिकति दही, चन्दन पाउडर र कागतीको रस मिसाउने । डन्डीफोर भएको भागमा यो पेस्ट दल्ने। कागती केही थोपामात्रै राख्ने। धेरै राख्न यसले पोल्न सक्छ। यो हुँदा दहीको मात्रा बढी राख्न सकिन्छ। सुखेपछि चिसो पानीले अनुहार धुने ।
बाफ लिएर अनुहारमा आउने डन्डीफोरको समस्याबाट टाढा रहन सकिन्छ। फेसियलपछि बाफ लिनाले अनुहारको छालाले भित्री पोषण पाउँछ। साथै यसले मृत छालाको समस्यालाई पनि हटाउँछ। अनुहारका छिद्र खोल्नका लागि बाफ लिन जरुरी छ। बाफ लिएपछि छालालाई कटनको कपडाले सफा गरी पुछ्ने । सीधै हातले पुछ्दा डन्डीफोरको समस्या झन् बढ्न सक्ने हुँदा त्यसमा सावधान रहनुपर्छ ।
गोलभेँडामा पाइने तत्व छालाका लागि लाभकारी हुन्छन् । गोलभेँडामा पनि कागतीजस्तै धेरै फाइदाजनक तत्व पाइन्छन् जसले डन्डीफोर हटाउन मद्दत गर्छन् र छालालाई चम्किलो बनाउँछन् । गोलभेँडाको रस अनुहारको छालाभित्रैसम्म पुग्ने गरी लगाउनुपर्छ। आधी घण्टा अनुहारमा राखेर चिसो पानीले पखाल्नाले अनुहारलाई फाइदा पुग्छ, नियमित रूपमा यसो गर्नाले डन्डीफोर बाट मुक्त हुन सकिन्छ ।
प्रहरी नियन्त्रणमा रहेका ज्ञानेन्द्र शाहीलाई छुटे